Usiza abafundi ezikoleni Abafundi bazosizwa ngama-pads | News24
Usiza abafundi ezikoleni Abafundi bazosizwa ngama-pads
isithombe: nosipho mkhize UNksz Pumelele Kunene ehhovisini lakhe elungiselela izinhlelo zakhe zokunilela ngama-pads.
UNksz Phumelele ‘Phummy’ Kunene ongomunye wabasunguli be-Kwenze uthe: “Ngahlala phansi nethimba lami senza uhlelo olubizwa nge-Pads on Wheels, lapho sinikela khona ngama ‘pads’ njalo ngenyanga ezikoleni. Lokhu kusiza abafundi bamantombazane bangaphuthi nakanye esikoleni uma bekuleso simo soku ‘geza’ esifika njalo ngenyanga,” kusho uNksz Kunene.
UNksz Kunene owakhulela eMnambithi (Ladysmith) maphakathi nesifundazwe saKwazulu-Natal, wasungula i-Kwenze, ngo-2009. I-Kwenze isiza abafundi besifazane ngezimfanelo ezidingekayo uma besesimweni soku ‘geza’ esifika njalo ngenyanga, okunye kwaloku ukuba siza ngama ‘pads’. Le nhlangano iphinde ilekelele abantu besifazane abahlangabezana nezinkinga ezehluka hlukene, empilweni jikelele.
UNksz Kunene uthe usebenzisana nethimba lamantombazane kuyo lenhlangano. Le nhlangano yangenelela ekusizeni izingane zamantombazane ezifunda izikoleni zase makhaya, lokhu kuqale ngenkathi uNksz Kunene evakashela ezinye zezikole ezisemakhaya ngenhloso yokuthola izinkinga ezibhekene namantombazane ezikoleni.
Uthe: “Inhliziyo yami yaba buhlungu kakhulu ngesimo engasibona ezikoleni, kepha ngenxa yokuthi inhlangano yethu ibhekelela amantombazane, ngaphoqeleka ukuba ngibhekane nokuqondene nawo,” kusho yena.
“Ngathola ukuthi abafundi abaningi bamantombazane abayi esikoleni uma bekuleso simo esibafikela njalo ngenyanga, okudala basalele emuva ezifundweni zabo. Imbangela yalokhu ukuthi abanayo imali yokuthenga ama ‘pads’ uma sekufike lesi sikhathi, ngakho babone kungcono ukungezi esikoleni,” kuchaza yena.
Uthe loludaba lokuphazamiseka kwabafundi bamantombazane, akuzange kumpathe kahle, wabe esesungula uhlelo lokunikela ngama ‘pads’ ezikoleni ezisemakhaya. “Ngikholelwa ukuthi wonke umuntu unelungelo lokufunda, ngakhoke uma izingane zamantombazane zingayi esikoleni ngenxa yento eyindalo, kusho ukuthi zizohlale zisalela emuva ezifundweni. Yingakho-ke sasungula i-Pads on Wheels,” kusho uNksz Kunene.
I-Kwenze iphinde ibhekele kakhulu abesimame nabantwana abahlukumezekile, abampofu nabangenayo indawo yokukhosela, ngakho uNksz Kunene nethimba lakhe babona kukuhle ukuthola indawo yokufukamela laba besifazane abanezinkinga. Uthe: “Sine khaya elise-Clairwood nelinye elise-Welbedacht, lapho kuhlala khona abesifazane abanezinkinga ezinjengokudla izidakamizwa ezingekho emthethweni, abangakwazi ukuphila ngaphandle kotshwala, nabahlukumezekile ngokocansi nangezindlela eziningi ezahlukene.”
“Sinakekela ngisho izaguga nabakhubazekile kuwo la makhaya. Siphinde siqinisekise ukuthi bayakuthola ukudla, izingubo zokugqoka, amanabukeni ezingane nokunye abakudingayo. Abanye siyabadedela uma sibona ukuthi sebezokwazi ukuzimela,” kusho uNksz Kunene.
Uthe abantu besifazane sebahlala lubhojozi emphakathini ngenxa yokudlwengulwa, ukubulawa, nokuhlukumezeka , ngakho ke i-Kwenze iphinde ifundise abesifazane ngezindlela zokuzivikela. “Sinezinhlelo zokuqwashisa abesifazane ngezinto eziningi ezenzeka emphakathini. Esikhathini esiningi emhlanganweni esiba nayo, kufika izingane zamantombazane ezineminyaka yobudala ephakathi kwengu-12 no-20.”
Uqhube wathi: “Sithola ukuthi iningi lamantombazane lihlekisana nabantu besilisa abadala kunawo, abawathembisa okuningi, baze bawanike ngisho nemali bawadobela ocansini,” usho kanje.
Amanye amantombazane azithola esenegciwane lesandulela ngculazi, ngenxa yokungazivikeli. “Sibafundisa nokwenza imisebenzi yezandla njengokuthunga izimpahla, abangazi khangisa baphinde bazidayise, ukuze bengathembeli kubantu besilisa ekutholeni imali yokuziphilisa,” kusho yena.
Unxuse osomabhizinisi nomphakathi ukuba balekelele ngokunikela ngama ‘pads’, imishini yokuthunga izingubo, amakhamera, izindwangu zokuthunga, ama thuluzi ase ngadini, nama khompyutha. Onothando lokuba yingxenye yalolu hlelo angashayela uNksz Phumelele Kunene ku-084 406 0044 n